Ny Nexus 6 dia hanana sensor amin'ny dian-tanana | Androidsis
Alfonso ny voankazo | | Rohy
Nasehonay anao androany famerenana feno ny Nexus 6, ny finday avo lenta farany amin'ny laharana Nexus novokarin'i Google. Fitaovana misy fampiasa tsara nefa Noho ny vidiny lafo dia mahatonga antsika hanombatombana safidy hafa.
Saingy mbola misy tsiambaratelo na te hahafanta-javatra momba ny Nexus 6, toy ny hoe hampiditra Google sy Motorola sensor sensor amin'ny Nexus 6 izay tamin'ny farany, araka ny noheverinao fa tsy vita. Mampalahelo satria eo amin'ny bokotra aoriana, miaraka amin'ny logo Motorola, dia mety ho tena tsara ilay sensor sensor.
Ny Nexus 6 dia mety nanana sensor sensor
Izany dia tamin'ny alàlan'ny kaody AOSP izay nahafantarana fa niasa tamin'ny Google a API ofisialy ho an'ny Android izay manohana rafitra mpamantatra ny dian-tànana izay nolavina ihany tamin'ny farany. Raha i Samsung sy i Huawei dia mampiditra sensor iray izay miasa miaraka amin'ny rindrambaik'izy ireo manokana, hafa ny tranga misy ny Nexus satria tsy manana ny fanohanan'ny teratany an'ity karazana fitaovana ity.
Azonao atao aza ny mahita ilay komitin'ny beton, nalefa farany faran'ny aogositra, tag miaraka amin'ny kaody "Shamu: hamafana ny tanan-tanan-tànana." Eto i Google dia diso tokoa tamin'ny fahitako azy.
Hanombohana azy, ny sensor an'ny dian-tànana, na dia mety tsy toa izany aza, dia tsy lafo loatra. Ny sensor Samsung Galaxy S5 tapakila dia mitentina $ 4, hoy ny mpandalina ny tsena IHS. Ka tsy afaka milaza isika fa ny fandaniana fanampiny dia antony. Moa tsy afaka nanana ny API ara-potoana i Google mba hampandehanana ny sensor an'ny dian-tànana? Ary inona ny olana! Afaka namoaka fanavaozana tonga lafatra tamin'ny ho avy izy ireo tamin'ny fanampiana an'io fanatsarana io.
Miharihary fa izany na ho ela na ho haingana Google dia hitondra API misy dian-tànana amin'ny Android. Hanangana rafitra fandoavam-bola amin'ny alàlan'ity karazana mpamaky ity izy ireo ary hanova ny tsena kely kokoa. Na dia matahotra aza aho fa tsy maintsy miandry ny Android 6.0 isika, na dia mbola gaga anay aza izy ireo taloha, saingy misalasala aho.
Inona no mety ho noeritreretinao momba ny Nexus 6 misy fakan-tsarimihetsika?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Rohy » Ny Nexus 6 dia saika hanana fantsom-panondro